Banijya News | » महिनामा तेस्रो पटक फेरि बढ्यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य, नयाँ मूल्य कती ? महिनामा तेस्रो पटक फेरि बढ्यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य, नयाँ मूल्य कती ? – Banijya News
काठमाडौं– नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गरेको छ । आइतबार राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी निगमले पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलमा प्रतिलिटर २ रुपैयाँ वृद्धि गरेको हो । नयाँ मूल्यअनुसार पेट्रोल प्रतिलिटर १२० रुपैयाँ पुगेको छ भने डिजेल र मट्टितेल १०३ रुपैयाँ पुगेको छ । यसअघि पेट्रोल प्रतिलिटर ११८, डिजल र मट्टितेल प्रतिलिटर १०१ मा बिक्री हुँदै आएको थियो ।
यस्तै हवाई इन्धन र ग्यासको मूल्य भने यथावत् राखिएको निमगले जानकारी दिएको छ । मूल्यवृद्धिपछि पनि पेट्रोलमा ७ रुपैयाँ ३९ पैसा, डिजेलमा प्रतिलिटर १ रुपैयाँ ९४ पैसा तथा खाना पकाउने एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिण्डर ४१८ रुपैयाँ ४७ पैसा घाटा रहेको निगमको भनाइ छ ।
यसअघि निगमले ३ चैत, १७ र ४ फागुन, ६ र २८ माघमा पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गरेको थियो । निगमले इण्डियन आयल कर्पोरेशनले वृद्धि गरेर पठाएको मूल्यसूचीअनुसार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गरिएको जनाएको छ ।